Lejarza, Gistau naPérez-Reverte. Chinhu chitsva kwazvo pamusoro peSpain | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Biography, Bvunzo, Vanyori, Mabhuku, Nyaya
David Gistau naArturo Pérez-Reverte ndiwo mazita maviri anozivikanwa vatori venhau nevanyori ine yakadarika nzira yakatambanuka. Y Mikel Lejarza, Mhumhi, Ndeimwe yeakanyanya vatambi vanonakidza, izvo zvinopfuura fungidziro, yemakumi mana emakore apfuura a Nhoroondo yeSpain. Vese vatatu vane mabhuku matsva pasi pemaoko avo ayo atove mumugwagwa. Ndivo vatatu.
1 Ndinoreurura - Mikel Lejarza naFernando Rueda
2 Vanhu vakasiya - David Gistau
3 Nhoroondo yeSpain - Arturo Pérez-Reverte
Ndinoreurura - Mikel Lejarza naFernando Rueda
Nguva pfupi yapfuura ndakanzwa a radio hurukuro kuna Fernando Rueda, mutori wenhau uyo ​​akamupa ruoko kuti anyore rake memories kuna Mikel Lejarza, Mhumhi. Akataura zvakare kubva, zvechokwadi, nzvimbo isingagumi uye nesabha rerunyararo rwakachengetedzwa nechisimba nezviitiko zvezviito zvake.
Kubvunzurudzwa kwanga kwakanaka zvekuti ndakaenda kune izvi Ndinoreurura uye ndinovimba ndinogona kuibata munguva pfupi. Izvo zvakakosha: hupenyu hwese kubvira muna 1974 akatanga kushanda mu Chakavanzika Service kupinda ETA ne alias eEl Lobo. Uye kusvika parizvino, paanoramba achimushandira CNI.
Taura nezve zvese pasina hafu yezviyero, nekuvimbika uye pasina kusiya chero chinhu, kunyangwe zvakanyanyisa. Uye kunyange rega nditaurewo mudzimai wake, Mamen, anovimba naye, shamwari uye shamwari mune mamwe mamishini ake. Anopa maonero ake pazviitiko izvi uye nenguva akararama muhukama hwakaomarara hwemukadzi akagovana naye makore makumi mana akareba. mukuru mumiririri yedu yemasevhisi masevhisi.
Vanhu vakaenda - David Gistau
Kuna David Gistau Ndinozvitevera mumapepanhau neredhiyo, kutanga nekuti anobva mukirasi yangu yemakumi manomwe, uye chechipiri, nekuti anondiyemura iko kuyerera kwekutaura kwake kwakataurwa, kufunga kwake kwakajeka uye kunyatso basta, pasina maburi uye hunyanzvi zvekuti ini ndinoshaya zvakanyanya pandinotaura ndisina makiyi. Iniwo ndakamutevera sa munyori wenhau en Nyika uyezve mukati ABC. Ndiye mumwe wevatori venhau vanokwanisa kunyora nekutaura kubva chero kwaunogara uchivatevera. Vanokukochekera, kwete svikiro.
Munyori we Yakadzika kurova, Ruzha rwemashure o Nekuti hapana mazai, pakati pevamwe, mubhuku iri idzva iye anounganidza nyaya iyo inounganidza akasiyana mavara anogara pamhiri dzakasiyana dzehupenyu uye zvakapfuura. Vari zvinyorwa zvidiki iyo inosanganisa chiedza nerima, kuseka nechisimba, uye zvinounza zvinoshamisa kubva mune zvakajairika mune avo mavara: vanopona pakufamba izvo hazvina kumira, rockers yemakushe akasiyana, vatori venhau insomniacs, matoyi akaputsika eartioneo uye zvimwe zvipuka zvemumaguta zvakafamba kuburikidza neTransition
Nhoroondo yeSpain - Arturo Pérez-Reverte
Zvaive pachena. Ivo vedu takaverenga iyi nhoroondo yeSpain mukati memakore aya "Patent ye corso", Pérez-Reverte ikholamu mune XL Vhiki nevhiki, taizviziva chaizvo. Zvese zvinyorwa izvi zvaizoperera mune izvi kuunganidzwa iyo yakatengeswa musi wa14. Pakupedzisira ivo vakagara mukati Zvitsauko 91 pamwe nepikicha.
Uye uchave mufaro mutsva kuverenga zvekare. Nezwi rake kudaro zvinofadza, zvinovava, zvinovava uye zvinosetsa. Uye kuzviisa pasi, hongu, kana kuti zvirinani akasiyana kuti Mr. Pérez-Reverte anofanirwa kutiudza zvinhu.
Iyi nhoroondo yeSpain inoenda kubva kumavambo kusvika kumagumo eShanduko uye iwe unogona kuona kuti munyori ainakidzwa nekuzvinyora. Akapindawo mune idzodzi nooks uye crannies iwe ausingade kuona zvakanyanya kana kuedza kunzwisisa. Kana izvo zvakananga ivo havadi kunzwisisa nei zvinoreva kufunga uye kuratidza. Uye havazi vese vanodisa kuzviita, kunyanya vanonyanya kubatikana uye vechokwadi.
Asi iri kuverenga kwakakodzera kune avo vedu vanozvipira yemunyori, kunyanya mune yake chikamu chemunyori, cheNhoroondo mune zvese uye yekusave akawanda machira anopisa. Uye ndezvekuti ndima dzakadai, chinhu chake ndechekuverenga hongu kana hongu:
Kubva Chitsauko XII: «Rimwe remadzinza aya raive revaAlmohad, vanhu vane nharo dzakaomarara, vaizivisa nezve Jihad, hondo tsvene - izwi rimwe chete rinonzwika kwavari-, vakapinda nechokumaodzanyemba kwekare Ispaniya ndokupa Mambo Alfonso VIII weCastile - mumwe zvakare humambo hwakanga hwakakamurwa pakati pevanakomana, kuti vasarase tsika, Leon naCastile vakanga vaparadzanisa - kurohwa nababa vangu nashe wangu anodikanwa muhondo yeAlarcos, uko Alfonso murombo aive akapfekerwa chirairo chekutanga ».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Lejarza, Gistau naPérez-Reverte. Chinhu chitsva kwazvo pamusoro peSpain